Ahlu Sunna oo sheegay in ay la wareegeen degmada Ceeldheer. [Akhris …] – Radio Daljir
Ahlu Sunna oo sheegay in ay la wareegeen degmada Ceeldheer. [Akhris …]
Ceel Dheer, Aug 11 – Culimada Ahlu Sunna Wal Jamaaca ayaa waxaa ay shaaca ka qaadeen in ay la wareegeen gacan ku haynta degmada Ceel Dheer halkaas oo ay ku sugnaayeen ururka Al Shabaab ee gacanta ku haya qeybo ka mid ah Koonfurta dalka Soomaaliya.
La wareegidda Ahlu Sunna ay kula wareegeen Ceel Dheer ayaa timid iyada oo uusan halkaasi wax iska hor imaad ahi uusan ku dhex marin malleeshiyada Ahlu Sunna iyo kuwa Al Shabaabka ee halkaas ku sugnaa.
Waxaana ay gaareen Malleeshiyada Ahlu sunna Habeenkii xaley degmadaasi waxaan markiiba banneeyey magaalada malleeshiyadii Al Shabaab.
Culimada Ahlu Sunna ayaa waxaa ay la wareegayeen indha waalaba deegaanno ku yaalla Bartamaha dalka Soomaaliya halkaas oo ay kaga awood badiyeen kooxda Al Shabaab, waxaana wali sii socda dadaallo kale oo ay ku doonayaan in ay ku hantaan gobollada dhexe.
Illaa iyo iminka ayaan wax war ah ka soo bixin dhinaca kooxda Al Shabaab kaddib ka bixitaankooda degmada, waxaana la sheegey in ay gaareen deegaanno kale oo hoos taga gobollada Galduud iyo Hiiraan.
Awoodda kooxda Al Shabaab ee gobollada dhexe ayaa wiiqantay tan iyo markii ay la wareegeen Magaalada Beledweyn Malleeshiyaad taageersan DFKMG halkaas oo ay u soo mari jireen inta badan sahayda iyo gurmadka ay u baahanyihiin kooxdani markii ay ku jiraan guluf colaadeed.
Lama garanayo waxa ay noqoneyso tallaabada xigta ee ay ku dhaqaaqayaan Culimada Ahlu Sunna kaddib qabsashadooda deegaannada bartamaha dalka Soomaaliya, iyaga oo aan looga baran in ay u sammeeyaan wax maamul ah isla markaana talada aysan ka siin dadka deegaanka iyo kuwa uleh aqoonta in ay wax maamulaan.